ऋणमा डुबेका प्रियंकाका हुनेवाला ससुरा, सहयोग गर्लान् त छोराहरुले? – Mero Film
ऋणमा डुबेका प्रियंकाका हुनेवाला ससुरा, सहयोग गर्लान् त छोराहरुले?
लामो समयको प्रेम पस्चात अब बलिउडकी नायिका प्रियंका चोपडा तथा निक जोनास विवाहको तयारीमा छन् । विवाहको तयारी गरिरहेकी प्रियंकाको परिवारको दुख लाग्दो खबर बाहिरिएको छ । उनका हुनेवाला ससुरा पल ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
पल एक कन्स्ट्रक्सन तथा रियल स्टेट कम्पनीका मालिक हुन । खबर अनुसार पलको यस कम्पनी ऋणमा डुबेको छ । यसले १० लाख डलरभन्दा बढि ऋण तथा २ लाख ६८ हजार डलर जरिवाना तिर्न सकेको छैन । यो ऋणबाट छुटकारा पाउनका लागि पलले आफ्नो कम्पनीसहित भए भरको सम्पति बेच्ने तयारी गरिरहेका छन् । पलका तीन छोरा छन् । यदि उनीहरुले चाहे भने बुबालाई सहयोग गर्न सक्ने छन् ।
एक रिपोर्टका अनुसार उनका छोरा अथवा प्रियंका बोईफ्रेण्ड निकको कुल सम्पति २ करोड ५० लाख डलर छ । त्यसैगरी अर्का छोरा केविनको २ करोड तथा जोको १ करोड ८० लाख डलर छ । भने कान्छा छोरो फ्रेंकीसँग ३० लाख बराबरको सम्पति रहेको छ ।
२०७५ भदौ १९ गते १४:०५ मा प्रकाशित